Debian Edu 11 inosvika kuzvikoro zvine zvakawanda zvitsva maficha kubva kuBullseye | Linux Vakapindwa muropa
Debian 12 Bullseye, yazvino vhezheni yeiyi robust operating system, iyo, pakati pezvinhu zvadzo zvakajairika, yakauya neLinux 11, yave kuwanikwa kweanenge maawa gumi nemaviri. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, mamwe mapurojekiti, akadai saMobian anga atozvisimbisa, achashanda kuvaka pane iyo nyowani kuburitswa. Iyo purojekiti zvakare Yakazivisa maminetsi mashoma apfuura Debian Dzidzo 11, inozivikanwawo seSkolelinux, inoitirwa dzidzo, zvese kuiswa kweumwe neumwe, uyezve netiweki nemaseva.
Pakati pezvakakurumbira zvitsva, uyezve, isu tine akawanda eBullseye, senge kernel Linux 5.10, LibreOffice 7.0 kana akagadziridzwa desktops, akadai seGNOME 3.38 kana Plasma 5.20 (rondedzero yakadzama mu Iyi link). Kune rimwe divi, pakati pezvinhu zvitsva zve «Skolelinux 11» isu tine kuti vakachinja injini yekutsvaga kuDuckDuckGo, zvese muFirefox ESR uye muChromium.
Debian Edu 11 Zvakakosha
Linux kernel 5.10.
Mamiriro emifananidzo: KDE Plasma 5.20, GNOME 3.38, Xfce 4.16, LXDE 11, MATE 1.24.
GCompris 1.0 bhokisi rekushandisa rekudzidzisa.
Rosegarden Mumhanzi Musiki 20.12.
LTSP 21.01: LTSP nyowani kutsigira nzvimbo dzisina basa dzekushandira. Vatete vatete vachiri kutsigirwa, ikozvino neX2Go tekinoroji.
Kubhururuka pamusoro penetiweki kunopihwa uchishandisa iPXE pachinzvimbo chePXELINUX kutevedzera LTSP.
Iyo graphical mode yeiyo Debian simaki inoshandiswa kune iPXE kuisirwa.
Samba ikozvino yakagadziriswa seyakazvimirira sevha nerutsigiro rweSMB2 / SMB3.
DuckDuckGo inoshandiswa seye default yekutsvagisa inopa kune ese Firefox ESR uye Chromium.
Chishandiso chitsva chakawedzerwa kumisikidza yemaharaRADIUS nerutsigiro rweEAPP-TTLS / PAP uye PEAP-MSCHAPV2 nzira.
Chishandiso chakawedzerwa chiripo chekumisikidza nyowani shoma purogiramu senzira yakatsaurirwa.
Debian Dzidzo 11 ikozvino inogona kutorwa kubva Iyi link ye 64-bit makomputa uye kubva uyu mumwe ye 32-bit makomputa. Sechikamu chemhuri yeBullseye, inotsigirwa kweanopfuura makore maviri uye mamwe matatu muLTS modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian Edu 11 anosvika aine akawanda eBullseye maficha matsva uye DuckDuckGo kudhizaina senge yekutsvaga injini
Debian 11 Bullseye ikozvino inowanikwa neLinux 5.10, GNOME 3.38, Plasma 5.20 uye mazhinji akagadziridzwa mapakeji